China LEDD620 Ceiling LED LED tokana mpitsabo hazavana amin'ny mpanamboatra LCD Control Panel | Wanyu
LEDD620 valin-drihana LED hazavana tokana mpitsabo miaraka amin'ny LCD Control Panel
LED620 LED Medical Light dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
LEDD620 dia manondro valin-drihana tokana mitaingina LED Light Medical.
Vokatra vaovao, izay nohavaozina mifototra amin'ny vokatra voalohany. Akorandriaka alimo aluminium, nohavaozina ny firafitra anatiny, ny vokadratsin'ny hafanana tsara kokoa. Module jiro 7, totalim-bozaka 72, loko mavo sy fotsy roa, takamoa Osram tsara kalitao, mari-pana loko 3500-5000K azo ovaina, CRI avo kokoa noho ny 90, ny fahazavana dia mety hahatratra 150.000 Lux. Ny tontonana fandidiana dia ny efijery LCD touch, ny jiro, ny mari-pana amin'ny loko, ny CRI dia manondro ny fiovan'ny fifandraisana. Ireo sandry fampiatoana dia azo afindra mihetsika tsara ary apetraka tsara.
1. Panel fanaraha-maso LCD mikasika ny solosaina LCD
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko an'ny LED Medical Light dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
2. Endo Mode
4. Volam-by LED avo lenta
5. Vahaolana namboarina
Afaka manome vahaolana famolavolana namboarina ho an'ny efitrano fandidiana misy haavo avo na ambany isika. Tsy misy vidiny fanampiny.
6. Fanatsarana ilaina
Jiro fitsaboana LEDD620 LED
Previous: LEDD500 Ceiling-Mounted LED Dome tokana miasa amin'ny hazavana miaraka amin'ny sandry voatonona
Manaraka: TD-TS-100 Factory Direct Supply Medical Pendant mitambatra ho an'ny Hopitaly
DD620 Ceiling Mounted Integral Reflection Opera ...